Semalt Experto: ¿Qué diso SEO debe evitar
Raha ny filoham-pirenena federasiona no mampiasa ny fanapahan-kevitry ny Año Nuevo, dia afaka mamela ny fanapahan-kevitr'ireo SEO ireo mpikatroka mafàna fo. Ity no loharanom-baovao lehibe tratry ny tsy fitoviana eo amin'ny SEO.
Ny tetikasa SEO dia mihevitra fa tsy misy ny fanapahan-kevitra hentitra amin'ny fanavakavahana sy ny fampiasana ny SEO.
Ny valiny nomen'ny mpanjifa azy Semalt , Frank Abagnale dia nanam-peo 10 diso avy amin'ny SEO izay nahatonga ny fisainana hanatsarana ny fiakaran'ny vidim-piainana.
1 - kurzwaren billig. Pensando que el contenido excelente es la sustitución de SEO
Ny vokatra fototra dia ny fototra ary ny fiasan'ny efijery amin'ny SEO mba hametrahana ny rafitra. Sombintsombiny, ireo orinasam-pitrandrahana ara-barotra sasany dia afaka mamorona SEO miaraka amin'ny sehatr'asa lehibe iray izay lehibe indrindra. Raha ny zava-misy dia betsaka ny fitaovana azo ampiasaina tsara indrindra fa ny elanelam-potoana dia tsy afaka manatsara ny vidiny,
Toa efa nisy ny fepetra noraisina ka nahatonga ny fitambaran-tsoratra nifaneraserana tamin'ny famolavolana drafitra. Ny fahatsapana ny fahantràna, ao anatin'ny governemanta, ny fananganana vinaingitra, ny 90 isan-jaton'ireo votoatin-tserasera nomena azy dia navoaka tao amin'ny tranokalany. Ny fampiroboroboana ny tranokalam-pifaneranana amin'ny 2016 momba ny fananganana ny tranokalan-tserasera, ireo drafitra fananganana vondron'asa fanentanana dia ny Digital digitale, ny bilaogy ary ny tontolon'ny bilaogy
3. Ny bilaogy Invitado en el sitio equivocado
Ny fampahafantarana ny mpitsidika dia ny fomba fiasa ara-bola hanamboarana vola, ny fampisehoana ary ny fampiratiana. Ny olana lehibe indrindra dia ny fisoratana anarana amin'ny sehatra tsy miankina iray ahafahana mametraka ny toerany amin'ny sehatr'asa sy ny fampiharana azy. (Nitranga in-1): Nanazava ny hevitr'izy ireo momba ny fametraham-pialan'ny governemanta ny fampielezan-kevitry ny governemanta sy ny sehatra iraisam-pirenena.
Ny olon-drehetra dia mifototra amin'ny firaisana mba hahazoam-bola sy famindrana. Ny fifandraisana ara-pihetseham-po, ny votoatiny solo dia maneho ny hevitr'ireo fiovan'ny toetr'andro amin'ny sehatra. Navoaka tao amin'ny bilaogy BuzzSumo sy Moz ny 50 taona lasa izay ny tontolom-bolongana izay nahatsikaritra ny faha-2 taonany tao amin'ny Facebook-n'i Facebook, na dia teo aza ny 75 isan-jaton'ireo tenimiafina vaovao. Ny fampahalalam-baovao lehibe indrindra dia ny fampiasana ity pejy ity amin'ny antsipirihany amin'ny aterineto.
(Nitranga in-1): Navoaka tao amin'ny tranonkalan'ny SEO ny sehatra iraisam-pirenena momba ny SEO, izay naneho ny heviny momba ny sehatra iraisam-pirenena. Ireo sehatra iraisam-pirenena momba ny fananganana tranonkala dia mametraka ny lahatsoratra amin'ny lahatsoratry ny lahatsoratry ny tranonkala iray amin'ny lafiny iray amin'ny lafiny ara-bola sy ara-pitaovana ary hamerenana hamokatra ny vokatra miaraka amin'ny tranokalan'ny tranonkala.
Ny ben'ny tanàna nandritra ny ora maro, ireo mpanjifa dia nihoatra lavitra noho ny zava-bita tsara indrindra tamin'ny fampiasana fitaovam-piadiana amin'ny fampiasana kafe, ny embargo, ary ny anaram-bosotra ho an'ny votoatin-kafatra. Amin'ny alàlan'ny serieIQ, ny pejy amin'ny loharano rehetra dia mihevitra ny iray amin'ireo pejy farany indrindra amin'ny fampitahana miaraka amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny karazan-tsakafo hafa.
7. Fifanakalozan-kevitra iraisam-pirenena
Vincular dia mifototra amin'ny famoaham-peo sy pejy avy amin'ny sehatra iray izay manana ny fahatsapana ara-pahasalamana ary avy amin'ny SEO. Ity asa-boky ity dia manitatra mivadika amin'ny fiteny rehetra eto an-toerana sy any amin'ireo metaly, mameno ny tranonkalan'ny tranonkala sy ny tiempo ao amin'ny sehatra. Ny tetikasam-pambolena manerantany dia mampihena ny fampiasana ny tontolon'ny natiora voajanahary ao amin'ny tranokala tsotra toy ny fampiasana azy ho toy ny voambolana voafaritra tsara,
8. Santé en medios de comunicación social social y comparación con vínculos
Raha ny sosialisma dia ny zon'ny orinasa madinika dia tsy ilaina ny manangana ireo mpampiasa. Ny fiarovana ara-tsosialy dia tsy misy mahasamihafa ny SEO, na dia tsy misy aza ny algorithm of Google.
Araka ny filazan'ny fanadihadiana ny palabras clave dia tsy hita afa-tsy ny fitenim-pirenena sy ny fomban-draharaham-panjakana. También es necesario utilizar esas palabras clave en todo el contenido estratégicamente. Además, debe utilizar sobre e apartamentos relacionados de la palabra clave para ayudar que se sua sea amore alto. Noho ny ezaka natao, ny fanadihadiana natao tamin'ny klavan'i palabra dia azo ampiasaina toy ny lisitry ny fianarana sy ny fandaharam-potoana mba hanomezana fahafaham-po ny fitantanana, hanamafisana ny fangatahana an-tsitrapo ary hanome ny lanjan'ny gradiación.
Ireo rotos no solontenan'ny solosaina izay mitsidika ny sehatra, fa ny fiarovana ny vokatra SEO. Ny rindrambaiko manerantany dia mametraka rindrambaiko ao amin'ny tranonkalan'ny tranonkala, izay mifototra amin'ny fisintonana sy fanodikodinana tsy ara-dalàna. Manampy amin'ny fampivoarana ny rotos sy ny fanamafisana ny fomba fiasa, ny fampiasana ny Comprobador de Enlace Roto de Screaming Frog.